३६० सिटको विमानमा एक्लै यात्रा गर्ने यात्रु को हुन् ? कस्तो रह्यो उनको यो यात्राको अनुभव ? को हुन त उनी ? – Yuwa Aawaj
३६० सिटको विमानमा एक्लै यात्रा गर्ने यात्रु को हुन् ? कस्तो रह्यो उनको यो यात्राको अनुभव ? को हुन त उनी ?
जेठ १५, २०७८ शनिबार 541
काठमाडौं : इमिरेट्स एयरलाइन्सको एक विशाल बोइङ ७७७ विमानमा एक जना मात्रै यात्रुले यात्रा गरेको विषय अहिले च’र्चामा छ । विमानमा एक्लै यात्रा गर्ने यात्रु अहिले सबैको चासोको विषय बनेका छन् ।
ती यात्रु को हुन् ? किन उनी मात्रै एक्लैले विमानमा यात्रुको रुपमा यात्रा गर्न पाए । एक्लै यात्रा गर्दा उनको अनुभव कस्तो रह्यो ? यस्ता धेरै प्रश्नहरु धेरै जनाको मनमा छन् । बीबीसीका अनुसार ती यात्रु भावेश ज’वेरी हुन् । उनले १९ मे २०२१ का दिन बिहान मुम्बइबाट दुबईको यात्रा गरेका थिए ।
दुबइमा बस्ने भावेश आफ्नो व्यवसायको सि’लसिलामा मे महिनाको पहिलो हप्ता मुम्बइ आएका थिए । काम सकेर दुबइ फर्किनको लागि उनले १० दिन पहिले टिकट बुकिङ गरेका थिए । पहिले उनी धेरैजसो बिजनेस क्ला’समा यात्रा गर्थे तर महामा’रीका कारण उनलाई जहाजमा भी’ड हुँदैन होला जस्तो लाग्यो र उनले इको’नोमी क्लासको टिकट बुक गरे । १८ हजार रुपैयाँमा उनको टिकट बुक भयो ।
१९ मेका दिन बिहान साढे ४ बजेको उडान थियो । अन्त’र्राष्ट्रिय विमान यात्रा नियमअनुसार उनी आधा रातमा विमानस्थल पुगे । चेक इन गर्ने समयमा थाहा भयो उनी विमानमा यात्रा गर्ने एक्ला यात्रु हुन् ।
केहीबेर उनी आफैंलाई आफू एक्लो यात्रु भएको विश्वास भएन । केही समयपछि उनलाई पक्का भयो यो सपना होइन वास्तविकता हो । उनी विगत २० वर्षदेखि दुबइमा बस्दै आएका छन् । यस बीचमा उनले कैयौं पटक मुम्बइ र दुबइको यात्रा गरे । तर, यो ‘सुखद संयोग’ उनको जीवनमा पहिलो पटक भएको थियो ।
दुबइबाट बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने ‘म आम रुपमा भिडियो बनाउँदिन । क्यामेरामा देखिन पनि हि’च्किचाउँछु । तर यो यात्रालाई मैले आफैं आफ्नो मोवाइलमा खिचें । म सधैंको लागि यो यादलाई साथमा राख्न चाहन्थें । चेक इनपछि एयर”पोर्टको गेटदेखि फ्ला’इटसम्म मलाई त्यसैगरी अटेन्ड गरियो ।
जसरी अरु दिन यात्रा गर्दा गरिन्थ्यो । इमिरे’ट्स फ्लाइटका स्टाफको लागि पनि यो पूरै अलग अवसर थियो । विमानमा पस्नासाथ क्रु सदस्यले ताली बजाएर स्वागत गरे । पाइलट ‘ निस्केर स्वयं भेट्न आए । मजा’कमा उनले पूरा विमान घुम्न पनि अफर गरे ।’
इमिरेट्स’को फ्लाइट इके ५०१ जसमा भावेशले मुम्बइदेखि दुबइसम्मको यात्रा गरे । त्यो ३६० सिट भएको बोइङ ७७७ विमान थियो । उड्डयन विशेषज्ञ राजेश हांडाका अनुसार मुम्बइदेखि दुबइको उडान अढाइ घण्टाको छ । यसमा लगभग २५ टन इ’न्धन ख’र्च हुन्छ । एयर”लाइन्सले केवल इ’न्धनका लागि मात्रै १२ देखि १८ लाख खर्च गरेको हुनुपर्छ ।
यदि पूरै यात्राको खर्च निकाल्ने हो भने २० देखि २५ लाखसम्म हुन सक्छ । तर, एक जना यात्रुको लागि एयरलाइन्सले यति धेरै खर्च किन गर्छ ? यो प्रश्न भावेशको दिमागमा पनि आएको थियो र उनले स्वयं क्रु सदस्यसँग यसबारे सोधेका थिए । भावेशले भने ‘खासमा मलाई यो कुरा पहिले नै लागिरहेको थियो कि विमानमा धेरै भी’ड हुने छैन ।
को’रोना महामा’रीका कारण भारतबाट जानेहरुलाई युएइमा कैयौं प्रतिब’न्ध लगाइएका छन् । अहिले केवल गोल्डेन भिसा भएका, युएइका नागरिक र कूट’नीतिज्ञलाई मात्रै भारतबाट युएइ जाने अनुमति छ । केवल यी तीन वर्गका यात्री मात्रै व्यवसायिक उडानमा दुबइ जान सक्छन् । दुबइबाट मुम्बइ जाने यात्रुलाई मुम्बइ पु¥र्याएपछि यसै पनि यो विमान खाली फर्किन्थ्यो ।
मैले बुकिङ गराएर राखेको थिएँ त्यसैले मैले पनि यसमा दुबइ आउन अनुमति पाएँ ।’ भावेश पेशाले हीरा व्यापारी हुन् । उनी स्टारजेम्स ग्रुपका सीइओ हुन् । दुबइमा पत्नी र २ छोराछोरीसँग बस्छन् । ३६० सिटको जहाजमा एक्लै यात्रा गरेको उनको भिडियो दुबइ र मुम्बइको ह्वा’ट्सएप ग्रुपमा भाइरल भइरहेको छ ।
यो यात्रालाई उनी सुन्दर अनुभव मान्छन् । उनका अनुसार यस्ता अवसर जीवनमा कोहीकोहीले मात्र जीवनमा एक पटक पाउँछन् । पैसाले यस्तो खुसी शायदै किन्न सकिन्थ्यो । उनले भने ‘मेरो फ्लाइट आधा रातको थियो त्यसैले मेरो निद्रा पूरा भएको थिएन । म पूरा यात्रामा सुत्न चाहन्नथें तर म निदाएँ । परिवारलाई मैले दुबइ पुगेपछि मात्रै मेरो साथमा के भयो भनेर बताएँ ।’ -डिसि नेपाल
Prevराष्ट्रपति भण्डारीबाट डिल्ली लंवा लिम्बूसहित ४३० जना कै’दीलाई माफी मिनाहा ।
Nextनारायणी अस्पताललाई मनिषा कोइरालाको भेन्टि’लेटरसहित स्वास्थ्य सामग्री सहयोग ।
नेपालका गोलकिपर किरण एसियाकै बेस्ट खेलाडीको मनोनयनमा – भोट गर्ने लिंक सहित
पुदिनाको सेवन बाट हुने अचम्मैको २५ फाइदाहरु, थाहा पाउनुहोस ।